Madaxa arrimaha debadda ee EU oo la kulantay Morsi - BBC News Somali
30 Luulyo 2013
Image caption Catherine Ashton waxa ay la kulantay Maxamed Morsi
Wararku waxay sheegeen in gellinkii danbe ee Isniintii Catherine Ashton ay muddo laba sacadood ah wadahadallo dheer la yeelatay madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray Maxamad Morsi.
Ilaa hadda shaaca lagama qaadin goobta ay kula kulantay Morsi, laakiin madaxweynahaasi hore waxa uu u xidhnaa milateriga dalka Masar ilaa bishan July 3-dii. Catherine Ashton waa mas'uulkii ugu horreeyey ee ajanebi ah ee ilaa hadda la kulma madaxweynahaasi hore intii xukunka laga tuuray, waxayna maalmahani booqasho ku joogtey magaalada Qaahira.
Image caption Militeriga oo hortaagan dad banaanbaxaya
Isla maanta oo Salaaso ah, taargeerayaasha Maxamed Morsi waxay sheegeen inay qorshaynayaan debadbaxyo waaweyn. Dhinaca kalena dawladda ku-meel-gaadhka ahi waxay ka digtay ku kicitaanka wax qas iyo isku dhac ah, iyo in haddii kale ay kaga hortegi doonto gacan bir ah.
Ciidamada nabadgelyadu waxa kale oo ay ku hanjabeen inay kala diri doonaan dadweynaha isku soo urursanaya agagaarka masjidka weyn ee Rabaac-al-Cadaawiya ee debadbaxa ka hor oogaya, fagaarahaasi oo ku yaal dhinaca waqooyi-bari ee magaalada Qaahira. Waana fagaarihii ay ka dhaceen maalintii Sabtidii dilkii iyo dhimashadii ugu badnayd.